Somalia oo Malaayiin Doolar loogu deeqay – news
Somalia oo Malaayiin Doolar loogu deeqay
Mas'uuliyiin dhowr ah ayaa loo xiray musuq-maasuq ay ku sameeyeen lacag deeq ahayd oo dowlado shisheeye iyo hay'ado caalami ah ugu deeqay wadanka in Coronavirus wax looga qabto.
TUNISIA - Dalal ay ku jirto Soomaaliya ayaa maanta loo ansixiyay lacag Malaayiin dollar ah, taasoo lagula dagaalamayo COVID-19 oo saameeyay Wadamo badan oo caalamka ku yaalla, sida lagu qoray website-ka Sanduuqa Horumarinta Afrika ee ADF.
Lacagtaan oo gaareyso 9.52 oo dollar ayaa waxaa ansixiyay Guddiga agaasimayaasha ee sanduuqa hormarinta Afrika ee fadhigiisa yahay dalka Tunisia.
Dalalka loogu deeqay lacagta ayaa kala ah Somalia, Jabuuti, Kenya, Sudan, Ruwanda, Ethiopia, Jesiiradaha Komooros, Tanzania, Burundi, Uganda, Eritrea iyo South Sudan, waxaana dhaqaalahan loogu tala-galay inay ku iibsadaan qalabka lagu baaro COVID-19, sidoo kalena lagu tababaro shaqaalaha caafimaadka.
Taliyaha Booliska oo gaarey Baydhabo
Warar 26 September 2020 19:22
Booliska Soomaaliya ayaa la filayaa inuu la wareego mas'uuliyadda amniga goobaha doorashooyinka sanadkan soo socda, sidaas darteed wuxuu billaabay qiimeyn gobollada lagu sameynayo.
Khayre oo baaq kasoo saarey heshiiska doorashadda
Warar 26 September 2020 18:35
Warar 26 September 2020 16:32